300 oo kamid ah qaxootigii Yaman oo Golis amabixisay | Golis Telecom Somalia
300 oo kamid ah qaxootigii Yaman oo Golis amabixisay
Shirkadda Isgaarsiinta Golis ayaa maanta mar kale ambabixisay qaar kamid ah qaxootigii kasoo barakacay dagaalada kasocda dalka Yaman kuwaas oo loo safriyay magaaladda Muqdisho ee caasimadda dalka oo ay ku suganyihiin eleladoodu.
Dadka maanta la ambabixiyay ayaa gaaryay 300 oo qof kuwaas oo ka koobnaa caruur, haween, iyo dad da’ ah, waxana shirkaddu u kiraysay 10gaari oo gayn-doonta magaaladda Muqdisho iyagoo lasiiyay kharash ay jidka kusii maraan.
Madaxa xiriirka dadwaynaha Shirkadda Golis Telecom Somalia Sh. Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur oo saxaafadda la hadlay xiligii la ambabixinayay dadkan ayaa sheegay in shirkadda Golis aysan ka daalayn inay wax u qabato dadka kasoo barakacaya dalka Yaman ee dhibaataysan.
“Golis iyadoo ka duuleysa balan qaadkeedi hore ee ahaa inay mar walba garab istaagayso dadka dhiban ee kasoo barakacaya colaadda dalka Yaman ayay maanta ambabixinaysaa dad gaaraya 300 oo qof, waana sii wadi doonaa hawsha Insha Allah maadaama ay muhiim tahay in loo gurmado walaalaha maslimiinta ah ee ka imaanaya Yaman” ayuu yiri Sh. Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur
Wasiir ku xigeenka Arrimaha gudaha Puntland C/llaahi Xaashi Qoob-deero ayaa dhankiisa uga mahadceliyay shirkadda Golis talaabadan ku dayashada mudan iyo mas’uuliyadda ay iska saartay dadka dhibban waxa uuna xusay inay muhiim tahay in si guud loogu soo gurmado dadkan balse aan Golis kaliya lagu siidayn hawsha.
Dadkii maanta la ambabixiyay ayaa dhankooda cabiray dareenkooda waxayna sheegeen inay ku faraxsanyihiin in loo celiyo deegaanadoodi iyo eheladoodi iyagoo arrintaas uga mahadceliyay shirkadda Golis.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in doonyo kale oo wada kumanaan qof oo kasoo qaxay dalka Yaman ay soo gaaraan dhawaan magaaladda Boosaaso waxana shirkadda Golis ay balan qaaday dufacd walba oo timaada ay qayb ka ambabixin doonto.